လက်ကား MF Ball Valve X9011 ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ | Xushi
အရွယ်အစား 3/4"; 1″; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"
မီဒီယာများ၏ အပူချိန်- ပုံမှန် အပူချိန်
ဖိအား- အလတ်စားဖိအား၊ 0.8 Mpa
ဆိပ်ကမ်းအရွယ်အစား: 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"
စံသတ်မှတ်ချက်-ANSI BSPT JIS DN
ချိတ်ဆက်မှု- အမျိုးသမီးချည်ကြိုးနှင့် အမျိုးသားချည်မျှင်
1. Thrust bearing သည် ပင်စည်၏ ပွတ်တိုက်မှု torque ကို လျှော့ချပေးသည်၊ ၎င်းသည် ပင်စည်အား ချောမွေ့စွာနှင့် အချိန်ကြာကြာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
2၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်ချက်- စပရိန်ကို ဘောလုံး၊ အဆို့ရှင်ပင်စည်နှင့် အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ကြားတွင် စီစဥ်ထားပြီး၊ ကူးပြောင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထုတ်ပေးသည့် တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တင်ပို့နိုင်သည်။
3၊ PTFE နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် ကောင်းမွန်သော ချောဆီများပါရှိပြီး ဘောလုံး၏ ပွတ်တိုက်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် သေးငယ်သောကြောင့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ရှည်သည်။
4၊ fluid resistance သည် သေးငယ်သည်- ball valve သည် valve classification အားလုံးတွင် fluid resistance အနည်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အချင်း pneumatic ball valve ကို လျှော့ချထားသော်လည်း ၎င်း၏ fluid resistance သည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။
5. ပင်စည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသည်- ပင်စည်သည် လှည့်ပတ်နေပြီး ရုတ်သိမ်းခြင်းမပြုသောကြောင့်၊ ပင်စည်၏ထုပ်ပိုးခြင်းတံဆိပ်သည် ဖျက်ဆီးရန်မလွယ်ကူသည့်အပြင် အလယ်အလတ်ဖိအားတိုးလာသဖြင့် တံဆိပ်ခတ်နိုင်စွမ်း တိုးလာပါသည်။
6၊ အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံတံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် ကောင်းမွန်သည်- polytetrafluoroethylene နှင့် အခြား elastic ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တံဆိပ်ခတ်ကွင်းသည် တံဆိပ်ခတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ နှင့် ball valve ၏ valve sealing capacity သည် medium pressure တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာပါသည်။
7၊ fluid resistance သည် သေးငယ်သည်၊ လုံးပတ်ပြည့်သော ball valve သည် အခြေခံအားဖြင့် flow resistance မရှိပါ။
8၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ သေးငယ်သောထုထည်၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်။
9, တင်းကျပ်စွာယုံကြည်စိတ်ချရသော။ ၎င်းတွင် တံဆိပ်ခတ်ထားသော မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါရှိပြီး ဘောလုံးအဆို့ရှင်၏ အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်ကို ပလတ်စတစ်အမျိုးမျိုးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကာ တင်းကျပ်မှုကောင်းကာ ပြီးပြည့်စုံသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်စုပ်စနစ်များတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
10၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်၊ အဖွင့်နှင့်အပိတ်၊ 90° လှည့်နေသမျှ အပြည့်အဖွင့်မှ အပြည့်အပိတ်အထိ၊ အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်ရန် လွယ်ကူသည်။
ယခင်- Compact Ball Valve X9002
နောက်တစ်ခု: Single Union Ball Valve X9201-T အဖြူရောင်